Diyaaradda Qatar Airways ayaa saddex toddobaad duulimaad ka bilowda magaalada Abuja ee dalka Nigeria
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Qatar Airways ayaa saddex toddobaad duulimaad ka bilowda magaalada Abuja ee dalka Nigeria
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Nigeria • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay ku dhawaaqday inay duulimaad ka samayn doonto saddex duulimaad toddobaadle ah magaalada Abuja, Nigeria iyada oo loo sii marayo magaalada Lagos laga bilaabo 27-ka Noofambar 2020-ka oo noqonaysa goobtii lixaad ee cusub ee ay shaaciso shirkadda diyaaradaha ee Qatar tan iyo markii uu cudurkan faafay. Adeegga Abuja waxaa ka shaqeyn doona shirkadda diyaaradda oo si casri ah loo dhisay Boeing 787 Dreamliner oo ka kooban 22 kursi oo ka tirsan Class Class iyo 232 kursi oo ka socda Class Class.
Madaxa fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno duulimaadyo aada caasimadda Nigeria. Qurba joogta reer Nigeria ee ku nool Yurub, Mareykanka iyo UK, waxaan ku faraxsanahay inaan hada u duuleyno magaalada Abuja marka lagu daro duulimaadyadii aan horey u joognay ee Lagos ee soo bilowdey 2007. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno shuraakadayada ku sugan Nigeria si aan si joogto ah u kobcinno. wadada iyo taageerida soo kabashada dalxiiska iyo ganacsiga gobolka. ”
Duulimaadyada in ka badan 85 jeer oo Aasiya-Baasifig ah, Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Ameerika, rakaabka doonaya inay u safraan ama ka yimaadaan Nayjeeriya waxay hadda ku raaxeysan karaan isku xirnaan aan xuduud lahayn iyada oo loo marayo Madaarka ugu Fiican Bariga Dhexe, Hamad International Airport. Bartamaha bisha Diseembar, Qatar Airways waxay shaqeyn doontaa in ka badan 65 duulimaad toddobaadle ah illaa 20 safar oo Afrika ah, oo ay ku jiraan Accra, Addis Ababa, Cape Town, Casablanca, Dar es Salaam, Djibouti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Luanda, Maputo, Muqdisho, Nairobi, Seychelles, Tunis, iyo Zanzibar.
Iyadoo la raacayo howlaha balaadhinta ay shirkaddu ku fidinayso Afrika oo dhan, rakaabku waxay rajayn karaan soo dhoweynta diiran ee Afrika iyada oo ay la socdaan shaqaalaha xamuulka dhaqamada kala duwan oo ay ka mid yihiin in ka badan 30 jinsiyado Afrikaan ah. Intaa waxaa sii dheer, rakaabka kuxiran shabakadeena sidoo kale waxay ku raaxeysan karaan filimo kala duwan oo Afrikaan ah, barnaamijyo TV-ga iyo muusigga Oryx One, nidaamka madadaalada duulimaadka ee Qatar Airways.
Maalgashiga istiraatiijiga ah ee Qatar Airways ay ku sameysay noocyo kala duwan oo shidaal wax ku ool ah, matoorro matoorro ah, oo ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee diyaaradaha Airbus A350, ayaa u suurta gelisay inay sii wadato duulimaadkeeda inta lagu jiro dhibaatadan oo ay si fiican u dhigto si ay u horseedo soo kabashada waarta ee safarada caalamiga ah. Diyaaraddu waxay dhowaan qaadatay seddex diyaaradood oo casri ah Airbus A350-1000, iyadoo kordhisay wadarta guud ee A350 ilaa 52 iyadoo celcelis ahaan da'da ay tahay kaliya 2.6 sano. Saameynta COVID-19 ay ku leedahay baahida safarka awgeed, waxay shirkaddu hakisay raxankeedii Airbus A380s maadaama deegaan ahaan aan qiil loo heli karin inay ku shaqeyso diyaarad noocaas oo kale ah oo afar engine ah suuqa hadda jira. Qatar Airways ayaa sidoo kale dhawaan soo bandhigtay barnaamij cusub oo u sahlaya rakaabka inay si iskood ah u dheelitiraan qiiqa kaarboonka la xiriira safarkooda ee goobta ballansashada.
Shirkad diyaaradeed oo abaalmarino badan qaadatay, Qatar Airways ayaa loo magacaabay 'Airlineka ugu fiican adduunka' iyadoo loo magacaabay Abaalmarinta Abaalmarinta Adduunka ee 2019, oo ay maamusho Skytrax. Waxaa sidoo kale loo magacaabay 'Duulimaadka ugu Fiican Bariga Dhexe', 'Fasalka ugu Fiican Ganacsiga Adduunka', iyo 'Kursiga Fasalka ugu Fiican ee Ganacsiga', iyada oo lagu aqoonsanayo waayo-aragnimadeeda heerka fasalka Ganacsiga, Qsuite. Qaab dhismeedka kursiga 'Qsuite' waa qaabeyn 1-2-1 ah, oo rakaabka siisa alaabada Ganacsi ee ugu ballaaran, gaar ahaaneed, raaxo leh iyo bulsho fog ee cirka. Waa diyaaradda kaliya ee la siiyay abaalmarinta 'Skytrax Airline of the Year', oo loo aqoonsan yahay inay tahay meesha ugu sareysa ee shirkadaha diyaaradaha, shan jeer. HIA waxaa dhowaan lagu magacaabay 'Madaarka Saddexaad ee Ugu Fiican Adduunka', oo ka mid ah garoomada diyaaradaha 550 ee adduunka oo dhan, oo ay bixiso Abaalmarinta Madaarka Adduunka ee Skytrax 2020.
Rakaabka Qatar Airways ee ka socda Afrika waxay hadda ku raaxeysan karaan gunnooyin cusub oo bagaash ah oo u dhexeeya 46 Kg oo loogu talagalay Fasalka Dhaqaalaha oo u kala qaybsan laba qaybood iyo 64 Kg oo u kala qaybsamay laba qaybood oo Qaybta Ganacsiga ah. Hindisahan waxaa loogu talagalay inuu siiyo rakaabka dabacsanaan iyo raaxo badan markay ku safrayaan diyaaradda Qatar Airways.
Jadwalka Duulimaadka Abuja: Arbacada, Jimcaha & Axadda
Doha (DOH) ilaa Abuja (ABV) QR1419 waxay baxaysaa: 01:10 timaado: 11:35
Abuja (ABV) ilaa Doha (DOH) QR1420 waxay baxaysaa: 16:20 timaado: 05:35 +1